परीक्षणशाला हो नेपाल
गोल्छा समूहले भारतमा निषेध गरिएको नाइजेरियन भारतमा निषेध गरिएको नाइजेरियन एएच् भ्याक्सिन उत्पादन गर्ने डेस्टर बायोसाइन्सेस नेपालको उद्घाटन गरेर ठूलै कम गरेको प्रचारबाजी गरेका छन् ।
यस्तो भ्याक्सिन बनाएर नेपालको कृषि र पशुस्वास्थ्यमा दूरगामी असर त पर्ने नै छ, यसको असरले देशलाई समेत ठूलो समस्यामा पार्न सक्छ । भारतले यस्ता लगानीलाई किन भित्रिन दिएन र नेपालले भारतबाट समेत लखेटिएको लगानीलाई भित्र्याएर वैदेशिक लगानी आयो भनेर देखाउने हो भने यो नेपालको बर्बादीबाहेक के होला र ?
ज्भकतभच द्यष्य कअष्भलअभक ल्भउब िउखत ीतम लाई गोल्छा समूहले चुनावमा नेकपालाई चन्दा दिएको उठ्तीका रुपमा पनि हेरिएको छ । पार्टीलाई चन्दा दिएर एनसेलले लाभकर छल्यो, चन्दा देउ कर तिर्छुसमेत भन्यो । नेपालको राजनीतिक कतिसम्म चन्दामुखी र व्यापारमुखी भएको छ भन्ने यो पछिल्लो उदाहरणले नेपालको कृषि र पशुक्षेत्र परीक्षण कित्तामा गयो ।
नेकपाको तल्लो तहमा उत्साह
‘नेपालको पानी, जनताको लगानी’– ओली सरकारले घोषणा गरेको यही एउटा कार्यक्रमले पनि नेकपाका इमान्दार पार्टीपंक्तिमा अपूर्व हौसला छाएको छ । साह्रै इमानदार भनेर चिनिने चन्द्रागिरी नगरपालिका १५ का वडाअध्यक्ष उत्तम राउत ‘आफ्नो मुलुकमाथिको नाकाबन्दीलाइ नाकाबन्दी भन्न नसक्ने दासहरुलाई भेनेजुएला माथिको अमेरिकी हस्तक्षेप ?’ ‘म नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीको कार्यकर्ता हुँ भन्न पनि लाज लाग्छ’ भनेर गुनासो गर्दै थिए, नेपालको पानी, जनताको लगानी कार्यक्रम घोषणा हुनसाथ उनले सगौरव भनेका छन– ‘बल्ल आयो दुई तिहाई सरकारको समृद्धिको कार्यक्रम । कार्यान्वयन हुनसके यो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा प्रगतिशील कार्यक्रम हो । यसले एकातिर जनतामा उत्साहको संचार गरेको छ भने अर्र्कोितर जनताको आफ्नै पहलमा, बलबुतामा उर्जाको उत्पादनले बहुआयामिक असर पर्ने र देशको कायापलट हुने निश्चित छ । तर उही कार्यान्वयन ?’ अर्थात कार्यान्वयन सबल हुनुपर्नेमा उनको विशेष जोड छ, सरकारलाई सुझाव छ ।
यद्यपि उनको प्रश्न पार्टीप्रति पनि छ । उनको विचारमा ‘एकताको एक बर्ष सम्म पनि पार्टी भुइँमा नआउने एकता प्रक्रियाको सिंहावलोकन हुनु पर्यो ।’
उनको पार्टीप्रतिको, पार्टी नेताप्रतिको गुनासो जायज छ । ऐतिहासिक रुपमा दुई तिहाइको सरकार छ, अहिले नगरे कहिले गर्ने ? देश विकासमा धमाधम निर्णय गर्दै जनताअपेक्षालाई संवोधन गर्न चुक्नु भएन । तव न जितको सार हुन्छ, देशैभरि नेकपाको सरकारको जयजयकार हुन्छ । उत्तमजस्ता कार्यकर्ता अरु पनि छन् होला देशमा । तर उत्तम नेकपा सरकारको रोलमोडल हुन्, जसलाई नेकपाले मूल्यांकन गरेर देशैभरि उनकोजस्तो काम गर्न उत्साह जगाउन सक्छ । सूर्य तब न चम्किलो हुनसक्छ । जसले एउटा वडालाई पुरै डिजिटल बनायो, वडामाा बाल, बृद्ध, महिला, सबै तह र तप्काका कमजोर पक्षको संरक्षण र सवल पक्षलाई समाजसेवामा आकर्षित गर्न सफल भएको छ । यस्ता कार्यकर्ताले गर्ने हो नेकपाको नेतृत्व, देशको नेतृत्व । नेकपाले यस्ता युवा राजनीतिमा ल्याउन सके चाणक्यले भनेजस्तो राजनीति उत्तम समाजसेवा हुनेछ ।
अहिले जे देखिएको छ, भ्रष्टाचारमात्र देखिएको छ । भ्रष्टाचारमाथि निर्मम रुपमा नेकपा सरकार अघि बढेन भने यो शासन ज्यादा दिन चल्नेछैन ।